Nidaamyada LMS: Nidaamyada Maareynta Barashada Internetka | Laga soo bilaabo Linux
Baro sida looga faa'iideysto kuweenna waqtiga, ilaha iyo awoodaha, gaar ahaan marka duruufaha shaqsiyadeed ama kuwa wadajirka ahi ay damaanad qaadaan ama u oggolaadaan, waa wax ay tahay inaan marwalba maskaxda ku hayno, si loo horumariyo, loona gaaro heerar sare guul, ladnaan iyo farxad. Sidaa darteed, waa inaan ka faa'iideyso waqtiga daalacashada, ama akhris, qorid, balooggag, ciyaar ciyaar, daawashada casharro ama waxyaabo kale oo badan oo warbaahin ah, ama qaadashada fasalo iyo / ama waxqabad koorsooyinka khadka tooska ah. Tan dambena, adeegsiga Meelaha LMS.
ka Meelaha LMS, taasi waa, Istaraatiijiyadaha bixiya Nidaamyada Maamulka ee Barashada khadka tooska ah, waa kuwa kuwa leh Nidaamyada (Softwares / Codsiyada) ku jihaysan gudbinta macluumaadka tababarka fool-ka-foolka ah, Maaddaama ujeeddadeeda muhiimka ahi ay tahay in si dijitaal ah loo maareeyo dhammaan doorsoomayaasha a habka barashada.
Waxaa xusid mudan in macnaha ah "LMS" waxay ka timi gaabinta ereyga oo laga soo qaatay ereyga af Ingiriisi: «Nidaamka Maamulka Waxbarashada», kaas oo Isbaanishka, lagu tarjumay "Nidaamka Maamulka Barashada" o "SGA".
Iyo inay diiradda saaraan shaqadooda fulintooda labadan qaybood badiyaa:
Maamulka ardayda / ardayda kaqeyb galeysa
Qeybinta waxyaabaha loogu talagalay barashada elektarooniga ama dijitaalka (e-learning).
1 Meelaha LMS
1.1 Astaamaha astaamaha LMS
1.2 Ujeedo iyo adeegsi
1.2.1 Ujeedada shirkadeed
1.2.2 Ujeedo ganacsi
1.2.3 Dhamaadka Tacliinta
1.3.2 Bilaash iyo Furan
Astaamaha astaamaha LMS
Kuwa ugu waaweyn waxaan ka xusi karnaa:
Maamul waxyaabaha ku jira waxbarashada / tababarka digitalka ah: iyadoo la adeegsanayo shabakadaha kombiyuutarka, ICT-yada iyo internetka.
Abuur warbixinno dhammaan howlaha iyo kaqeybgalayaasha: si loo fududeeyo falanqaynta nidaamka waxbarashada iyo go'aan qaadashada la xidhiidha.
Maamul falalka iyo waxqabadyada: ka mid ah kaqeybgalayaasha gudaha madal la maareeyay. Oo ay ku jiraan Ardayda, Tababarayaasha, Maamulayaasha iyo Fasalada, Imtixaanada, Qoraalada, Jadwalka, iyo kuwa kale.
Ujeedo iyo adeegsi
U fuliso la-talinta khadka tooska ah macaamiisha
Samee istiraatiijiyad suuqgeyn soojiidasho ah (Suuq Inbound)
U oggolow taageerada khadka tooska ah macaamiisha ama xubnaha urur, wax soo saar ama adeeg la bixiyo.
Ku guuleysashada isdhexgalka barnaamijyada suuqgeynta dhijitaalka ah
Mashruuca sumadda urur, wax soo saar ama adeeg
Ku dar dariiqooyinka lacag bixinta ee bixinta adeegyada ama iibinta alaabada.
Bixi farsamooyinka suuqgeynta boostada (Suuqgeynta Boostada)
Automate geedi socodka iibka ee koorsooyinka internetka ama adeegyada kale ee la midka ah ama la xiriira.
Si mug leh u maaree ardayda iyo koorsooyinka / aqoon isweydaarsiyada
Samee jaangooyooyinka habka tababarka ee la baray
Ku guuleysato waafaqsanaanta tikniyoolajiyada / hababka waxbarasho ee la caddeeyey, sida: SCORM
Naqshadeynta qaabdhismeedka tababarka si hufan oo fudud macallimiinta, macallimiinta iyo maamulayaasha
Ka mid ah kuwa ugu caansan Meelaha LMS noocan ah ayaa lagu sheegi karaa:
Kuwa kale: Akaud, Claroline, Dokeos, E-collage, E-Doceo, Kajabi, Podia LMS, Saba LMS, Teachable, Thinkifi, Wiziq.
Bilaash iyo Furan
Shiraac LMS: https://community.canvaslms.com/ - https://www.instructure.com/canvas/es
Nota: Haddii aad taqaanno mid kale Bilaash, bilaash ah oo furan barnaamijka LMS, noo dhaaf faalladaada magacaabista, si loogu daro liiska. Hadhowna, daabacaadaha kale waxaan ku eegi doonnaa kan dambe ee la soo sheegay, iyo kuwa la wada sheegay. Qaab noocan oo kale ah oo lagu garan karo, lagu hirgelin karo loona adeegsan karo qof walba, xilliyadan marka barashada iyo barashada internetka waa hadda, a mudnaanta iyo baahida adduunka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Plataformas LMS», taasi waa, on «Plataformas de Sistemas de Gestión del Aprendizaje» internetka, qaar badan oo ka mid ah ayaa la abuuray oo lagu shaqeeyaa Software Libre y Código Abierto» oo aad siisid wax kale hufan, bilaash ah oo furan si loo baro oo wax loo barto, waa dan iyo faa iido weyn, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Nidaamyada LMS: Nidaamyada Maareynta Barashada Internetka
Nooca cusub ee Java SE 14 horey ayaa loo soo saaray waana kuwan wararkiisa